Muxuu salka ku hayaa dagaalkii ka dhacay Baladweyne? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu salka ku hayaa dagaalkii ka dhacay Baladweyne?
Inkastoo Madaxweyne ku xigeynka Hirshaeelle uu degan yahay Baladweyne, hadana Janaraal Xuud ayaa ka hor yimid in Magaaladu martigaliso shirka Golaha Wasiirrada taas oo sababtay dagaal dhaliyay Khasaaro xooggan
BALADWEYNE, Soomaaliya - Ciidamo ka amar qaata Hogaamiyaha jabhadda la magac baxday Kacdoonka Gobolka Hiiraan, Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame,’ Xuud’ oo kasoo horjeeda Maamulka Hirshabeelle ayaa xalay weerar ku qaaday magaalo madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
Duulaanka ayaa yimid kadib markii la qorsheeyay in Shirka Wadatashiga Golaha Wasiirrada Maamulka Hirshabeelle, markii ugu horreysay tan iyo markii la magaacay lagu qabtay Magalada Baladweyne, taas oo uu ka hor yimid Jeneraal Xuud.
Sida ay xaqiijiyeen dadka ku dhaqan degmada, xoogga dagaalka ayaa ka dhacay Xaafadaha loo yaqaan Kooshin iyo Xaawo taako oo xiga dhanka Garoonka diyaaradaha magaalada.
Dagaalka ayaa sababay khasaaro xooggan oo dhimasho iyo dhawac leh, waxaana jira dhibaato gaartay shacabka iyo degaankii lagu dagaalamay.
Jeneraal Xuud, oo la hadlay warbaahinta, wuxuu sheegay in Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya (CXDS) ay ka qeyb qaateen dagaalka, wuxuuna Dowladda Fadaraalka ku eedeeyay in ay wali sii hurineyso xasaradaha gobolka Hiiraan.
Guud ahaan ciidamadii taabacsanaa Xuud ayaa ka baxay Baladweyne, waxaana hadda dadka degaanku soo sheegayaan in waddooyinka magaalada lagu soo daadiyay ciidamo afku u xiran yahay oo ka tirsan kuwa loo yaqaan Gorgor oo ka mid ah Xoogga Dalka.
Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame,’ Xuud’, wuxuu ka gadooday doorashadii Madaxweynaha Hirshabeelle, taas oo Madaxtooda Soomaliya ay u boobtay Cali Guudlaawe, oo Madaxweyne ku xigeyn ka ahaa Maamulkii hore.